Hasarotam-piaro Nodoran’ny vadiny tamin’ny lasantsy ilay vehivavy
Nisehoana trangan-javatra mampalahelo tany amin’ny kaominina Tsaratanana, distrikan’i Faratsiho ny talata alina lasa teo.
Renim-pianakaviana iray manodidina ny 41 taona no norarahan’ny vadiny tamin’ny lasantsy ary nodorany avy eo rehefa nihanafana ny fifamaliana teo amin’ny roa tonta. Raha araka ny vaovao voaray dia resaka hasarotam-piaro no niteraka ny ady ka ilay ramatoa efa nihiaka namaivain’ny firehetana no novonjen’ny fokonolona. May avokoa ny tapany ambony amin’ny vatany. Nanomboka teo amin’ny foitrany ka hatrany amin’ny tavany, antony tsy ahitana tsara ny endriny intsony. Efa manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly moa ity renim-pianakaviana iray ity. Efa notazonin’ny mpitandro ny filaminana kosa ilay rangahy. Fantatra fa tsy misy ahiana ny ainy. Manan-janaka efatra mianadahy izy mivady ireto.